कति बैंकिङ गर्नु अव थाकें भन्दै यस्तो लेखेर ग्लाेवल आईएमई बैंक छाडे कुँवरले (कुवँरका ११ बुँदे स्पष्टिकरणसहित) - Artha Path Artha Path
कति बैंकिङ गर्नु अव थाकें भन्दै यस्तो लेखेर ग्लाेवल आईएमई बैंक छाडे कुँवरले (कुवँरका ११ बुँदे स्पष्टिकरणसहित)
२) म मेरो रोज़गार समझौता अनुसारको वाकी सेवा अवधी २०७८ जेठ मसान्त सम्म नै काम गरेर वैकिंग क्षेत्र मात्र होईन सम्पूर्ण क्षेत्रबाट पुर्णकालिन कामबाट अवकाश लिन चाहन्थे तर मानिसहरुका सवै इच्छा र आकांक्षा पुरा हुदैनन् ! म कुनै ठूलो महत्वकांक्षा राख्ने मान्छे होईन । जीन्दगी भरी मेहनत गर्ने र मेहनतको फल वापत जे पाएँ त्यसैमा चित्त बुझाएँ ! तर मेरो यों आकांक्षा पुरा नभएकोमा मलाई जीन्दगी भर अलिकति पिढा हुनेछ ।
३) जिन्दगी भर मैले निरन्तर रुपमा “९९६” को मोडेलमा काम गरें अर्थात विहान ९ बजे देखि वेलुका ९ वजे सम्म हप्ताको ६ दिन काम गरें । ज़िन्दगीका थुप्रै दिन दिनको १४-१५ घण्टा र शनीवारका दिन काम गरेको छु ! पढाइमा त अव्वल नै थियँ तर सरकारी स्कुल र कलेजमा पढेको एक मध्यम वर्गीय किसानको छोरो थियँ र सहायक तहवाट वैकिगं क्षेत्रमा प्रवेश गरेको थियँ ! म आज जहाँ छु र ज़िन्दगीमा मैले जे हासिल गरेँ त्यो सवै मेरो मेहनत कै फल हो ।
४) तर अव मेरो स्वास्थ्य र उमेरले त्यसरी नै “९९६”को मोडेलमा निरन्तर रुपमा काम गर्न साथ नदियको जस्तो महशुस भयो । २१ लाख भन्दा वढी ग्राहकहरु, ३१०० भन्दा वढी कर्मचारी र लाखौं शेयरधनीहरु भएको ग्लोवल आईएमई वैक जस्तो वैकमा जागिर खाने नाममा कुर्चिमा टासियर वस्न मन लागेन । आशातित गति, अपेक्षा र भावना अनुरुप कार्यसम्पादन गर्न निरन्तर “९९६” को मोडेलमा काम गर्न ज़रूरी छ तर मेरो स्वास्थ्य र उमेरले साथ नदिएकाले सिईयोको जिम्मेवारीमा निरन्तरता दिन उपयुक्त ठानिन । यदि मैले जागिर मात्र खाने सोचले कुर्चीमा टाँसिएर मात्र वसेको भए, वैकका सबै सरोकारवालाहरु (ग्राहकहरु,शेयरधनीहरु,कर्मचारीहरु, नियमनकर्ता / सरकार र समुदाय) प्रति मैले अन्याय गरेको हुने थियँ ! यो मेरा लागि स्वीकार योग्य थियन ।
५) विं.सं २०७४ असार १ गते तत्कालीन जनता वैकमा सिईयोको रुपमा कार्यभार सम्भाल्दा मेरो कार्यावधि ४ वर्ष तोकिएको थियो तर मैले त्रिवेणी विकास वैक र सिध्दार्थ विकास वैक मर्ज़ गरेर एकै चोटी ठूलो भएको जनता वैकलाई “अटोपाईलट” मा लग्न २ वर्ष लाग्छ र सो समय पछि मलाई विदा दिनु पर्छ भनेर तत्कालिन संचालक समितिलाई भन्थे र व्यवस्थापनका सहकर्मी साथीहरुलाई पनि २ वर्ष पछि वैक तपाईहरुले नै चलाउने हो, म त यहाँ २ वर्ष मात्र वस्ने हो भन्थे । त्यो हिसावले म १३ महिना वढी वैकमा काम गरेको छु । अझ त्रिवेणी विकास वैक र सिध्दार्थ विकास वैकको मर्जरको सिलसिलामा मैले परामर्शदाताको रुपमा काम गरेको अवधी समेत गणना गर्ने हो भने वैकसंग ३ १/२ वर्ष सम्वध्द हुन पुगेको छु।
६) ग्लोवल आईएमई वैकले राम्रो गरेको छ, राम्रो गर्दैछ र अझ राम्रो गर्ने संभावनाहरु विध्दमान छन् ! देशको अर्थव्यवस्थामा अर्थपूर्ण योगदान दिन सक्ने वैकको क्षमता छ । वैकको पुर्वाधार सवल छ, वैकको व्यवसाय राम्रो छ, वैकको छवि राम्रो छ र वैकको उच्च व्यवस्थापन तथा विभागीय प्रमुखहरु लगायत अन्य कर्मचारीहरु मेहनती, वफादार,लगनशील, र परिणाममुखी छन्। म मेरा सम्पूर्ण सहकर्मी साथीहरुलाई miss गर्ने छु । यस्तो गुणहरु भएको वैकले भविष्यमा अझ राम्रो गर्दै जाने छ भनि सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुमा आश्वस्त पार्न चाहान्छु । र म यस घडीमा वैकका सवै सरोकारवालाहरुमा आ-आफनो ठाउँबाट भविष्यमा पनि वैकलाई थप साथ र सहयोग गर्न हार्दिक आव्हान गर्दछु ।
७) विगत करीव साढ़े ३ दशक वैकिंग क्षेत्र र त्यस भन्दा अघी करीव साढ़े २ वर्ष अध्यापन क्षेत्रमा थुप्रै सहकर्मी साथीहरुसंग काम गरेको छु। आफुले काम गरेका वैकका कर्मचारीहरुका साथै अन्य वैक तथा वित्तीय संस्थाहरुका साथीहरु, नेपाल राष्ट्र वैक र अन्य नियमन संस्थाहरुका सरहरु / म्याडमहरुसंग र मेरा ग्राहकहरुसंग थुप्रै अन्तरकृयाहरु र वैठकहरु गरेको छु। यस दौरानमा मलाई थाहा छ मैले केही साथीहरु र विधार्थीहरुलाई चोट पुर्यायको छु। यसको लागि म यहाँहरुसंग माफ़ी माग्न चाहान्छु । मैले जानी जानी यहाँहरुको चित्त दुखाउने काम नगरेकोले व्यक्तिगत रुपमा नलियर व्यावसायिक रुपमा लियर मलाई माफ गर्नु हुनेछ भन्ने आशा गरेको छु।
९) मेरो साढ़े ३ दशकको पूर्णकालिक व्यवसायिक जीवनमा उच्च नैतिकताका साथ ईमान्दारीतापुर्वक संस्थागत सुशासन क़ायम गर्दै काम गरेको छु । मैले सधै “Good Sleep” रोजें, “Good Food” कहिल्यै रोजिन। यसले मलाई “Fearless”वनायो। कतिपय अवस्थामा यो मेरो Strength पनि वन्यो weakness पनि ! यसै कारण कसैले मेरो नैतिकता र ईमान्दारीतामा औंला ठड्याउन सकेनन् ! जीन्दगीमा मैले कमाएको सवै भन्दा ठूलो पूँजी हो यो! मेरो यस्तो चरित्र निर्माणका लागि जन्मका हिसावले मलाई जन्म दिएर हुर्काउने मेरा स्वर्गीय माता पिता तथा हजुरआमा (मावली) र मेरो वैकिगंको महाविद्यालय ग्रिन्ड्लेज / स्टैण्डर्ड चार्टड वैकलाई स्रेय जान्छ ! म वहाँहरुलाई सधै संझने छु !
१०) बैकमा काम गरिरहेको अवस्था र बैकिगं क्षेत्र भन्दा वाहिर रहेको अवस्थामा पनि मिडियाले मलाई सधैं साथ र सहयोग दियो । वित्तीय सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत १/२ वर्ष नेपाल वैकमा काम गर्दा ( जुलाई २००३ -डिसेम्वर २००६) देखि नै मेरो वहाँहरुसंग संगत रह्यो। वहाँहरुको रचनात्मक सहयोगको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहान्छु । कार्य व्यस्तता आदिका कारणले कुनै दिन फोन उठाइन होला, भेट्न सकिन होला वा ठाड्-ठाडो रुपमा प्रस्तुत भएको हुंला, यसको लागि म वहाँहरु संग क्षमा याचना गर्दछु।
सिईअाे कुवँरकाे फेसबुकबाट ।
बिहिबार थप ५ सय २५ जनामा कोरोना, ९६ जनाको मुत्यु
काठमाडौं । बिहिबार देशभर थप ५ सय २५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।